Nhau - Sei uye Zvatingaite Kana Kana Kudonha Pasi Masitepisi Akanyanya?
Sei uye Zvatingaite Kana Kana Kudonha Pasi Masitepisi Akakomba?
Chaizvoizvo kudonha ndezvimwe zvezvikonzero zvinowanzoitika zvekukuvara zuva nezuva muUS uye zvikonzero zvakajairika zvekukuvara kwehuropi. Zvinoenderana neongororo yekutsvagisa ya2016, chero kupi kubva pa7 ~ 26% kudonha kunoitika pamatanho.
Nepo mamwe masitepisi anodonha zvichikonzera kukuvara kwemusoro kuri pachena kana kupunzika kwehudyu izvo zvinoda kushanya mukamuri yekukurumidzira, dzimwe nguva zvinonetsa kuziva kana kuwira pasi pamatanho kwakakomba zvakakwana kuti zvide kurapwa.
Sei uye zvatingaite kana iri emergency mushure mekudonha, pane zviratidzo zviri pachena zvekuti rwendo kune dhipatimendi rekukurumidzira runodiwa. Hezvino zvimwe zvinhu zvekutarisira kunze:
Kana mumwe munhu asina chaanoziva, fonera 911 nekukasira. Kunyangwe kana munhu wacho achiuya uye achiratidzika kunge akanaka, tora munhu iyeye kune dhipatimendi rekukurumidzira kuti aongorore kukakavara uye kuongororwa kwakazara kwechiremba.
Tsvaga rubatsiro rwechiremba nekukasira, kana mumwe munhu ari kurwadziwa nemusoro zvakanyanya, kusvotwa uye kurutsa, kana kuvhiringidzika.
Kumwe kukuvara kunogona kukonzera kubuda ropa kwakanyanya uko kusingamire mushure memaminitsi gumi nemashanu ekumanikidza kana panogona kunge paine kutyoka kuri pachena. Aya mamiriro anoonekwa seanokurumidza.
Kana kudonha kwakonzera kurasikirwa kwekunzwa mune chero magumo, kana mumwe munhu achiona zvichinetsa kufamba kana kutaura, munhu iyeye anofanira kuongororwa nachiremba nekukasika.
Sei uye zvatingaite kana unodonha uye uri wega mumba, pane zvinhu zvishoma zvaunogona kuita:
Kana iwe uchiziva, asi uri wega uye usingakwanise kusvika kana kushandisa foni yako, shevedzera zvinonzwika kuti ubatsirwe.
Kana zvichibvira, rova ​​masitepisi kana pasi neshangu kana neimwe nzira ita ruzha rukuru sezvaungagone.
Iwe unofanirwa zvakare kuedza kusvika kune yakachengeteka, yakagadzikana nzvimbo yekumirira rubatsiro. Izvi zvinogona kureva kusimuka kubva pamatanho kana usiri panzvimbo yakati sandara.
Kana iwe uchinzwa kuti kufamba kuchakonzera kumwe kukuvara, saka ramba wakamira uye wakamirira rubatsiro.